UDkt Asanda Mditshwa.Click here for English version
UDkt uAsanda Mditshwa wase-School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences (e-SAEES) uqokwe abambe iqhaza kwi-Future Professors Programme (i-FPP) yi-National Research Foundation (i-NRF) ne-Department of Higher Education and Training ngenxa yamagalelo akhe okuba ngumholi wezemfundo emkhakheni weSayensi Yezitshalo.
UMditshwa uqokwe yi-College of Agriculture, Engineering and Science (i-CAES) ngemuva kokukhishwa kwesimemezelo sokuthi akuqokwe abantu kanti lokhu kuqokwa kwakhe kufakazela ukuthi ungesinye sezifundiswa ezivelele eNingizimu Afrika. I-FFP izokweseka izifundiswa eziqokiwe ohlelweni lokusimama ekubeni ngosolwazi, okuzothuthukisa imfundo ephakeme eNingizimu Afrika.
Ukuzinikela kukaMditshwa ekuthuthukiseni imfundo ngomsebenzi wakhe, ubuciko, ukwenza izinto ngendlela entsha, ukukhuthala, ukufisa ukufundisa nokuphokophela nokuzimisela ukusebenza nabanye abantu kumenze wavelela.
‘Ngijabule kakhulu futhi ngiyabonga ngokuqokwa ngibe ngomunye wezifundiswa ezincane ezivelele eNingizimu Afrika. Yinto enkulu lena, ikakhulukazi njengoba ngazi izikhungo zemfundo zaseNingizimu Afrika zinabantu abaningi abanesiphiwo,’ kusho yena.
Ngenxa yokubona izinselelo ezibhekene nemboni yezitshalo ngenxa yezithangami zokucijana nezingqungquthela ze-Citrus Academy ngenkathi esenza izifundo zokuqala e-University of Fort Hare, uMditshwa wakhuthazeka ukuthi aqhube izifundo kwifiziyoloji yesivuno ngenhloso yokuthuthukisa nokuhloa ubuchwepheshe bokunciphisa ukulahleka kokudla ebe efundisa futhi ecija isizukulwane sososayensi bangomuso endimeni yezolimo.
UMditshwa wafika e-UKZN eminyakeni engaphezu kweyisithupha edlule wenza iMasitazi kweZolimo ngonyaka wezi-2011, walandelisa ngeziqu zobudokotela kwiSayensi Yezitshalo e-Stellenbosch University. Kulonyaka uthweswe i-Postgraduate Diploma in Higher Education ayiphase ngamalengiso e-UKZN.
Ucwaningo lukaMditshwa lugxile ezindleleni ezintsha zokuphatha isivuno ukugcina izinga lesivuno ngemva kokuvuna, okuyinselelo enkulu embonini yokudla emhlabeni okuholela ekulahlekeni kwama-30% okudla okuvunwayo. Njengoba kuvame ukusebenzis amakhemikhali, uMditshwa ugxile kwezinye izindlela ezingenangozi ebantwini nakwimvelo.
UMditshwa onezinga-Y2 le-NRF, ubhale amaphepha ocwaningo abuyekezwe ngabalingani bakhe angama-63 nezahluko ezincwadini, weluleka abafundi abenza ucwaningo abangama-25, kanti kumanje weluleka abafundi abali-12 abenza ucwaningo lweMastazi nezifundo zobudokotela. Ungumhleli obuyekeza ucwaningo lwabanye nelungu lebhodi lebhuku locwaningo i-Frontiers in Sustainable Food Systems journal.
Impumelelo yakhe kwezemfundo ingenxa yomndeni wakhe, ikakhulukazi umkakhe u-Amanda. Ubonga abalingani bakhe e-SAEES, ikakhulukazi oSolwazi Lembe Magwaza no-Samson Tesfay ngokumamukela eNyuvesi, bamcija, benza indawo yokuthi akwazi ukuthi afunde futhi azibonakalise.